Kiobàna Mpamokatra Sarimehitsika : Mandray An-Tànana ireo Teknolojia Nomerika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Febroary 2013 3:46 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, polski, 日本語, Español
Vanim-potoana iray vaovaon'ny Mpamokatra sarimihetsika indray no tafajoro ao Kiobà, araka ny lahatsoratra navoakan'ny gazety The New York Times [en]. Mitantara ny fiainan'i Sebastián Miló ilay lahatsoratra, Kiobàna iray talen'orinasa izay “zara raha nanana ny vola hamatsiana solika ity fiarabeny efa antitra hitaterana ireo ekipany haka sary ireo tantara an-tsary isanandro, maika moa fa na dia ny andoavana ny karaman'ireo mpilalao aza dia tsy ampy akory”.
Nefa Atoa Miló, Kiobàna 33 taona, Mpamokatra horonantsarimihetsika, nanana fakantsary Canon 5D nomerika
ary manana tantara mahaliana. Tamin'izany, nandritra ny herinandro iray namaivay ny May 2011,
nandrakitra ny “Truckdriver” izy, horonantsarimihetsika iray mampientanentana eo amin'ny 25 minitra mikasika fampitahorana nitranga tamina kilasimandry iray voadokadoka tany ambanivohitra, toerana nandanian'ny Kiobàna an-tapitrisa ny ampahany tamin'ny fianarana ambony nataony.
Namoaka ny eritreriny ilay Mpibilaogy sady Mpitsikera horonantsarimihetsika Juan Antonio García Borrego ny Aogositra 2011 [es]:
Tsy ny hampianatra ny olona ny hampiasa solosaina fotsiny akory no atao amin'izany; fa kosa ny hahaizan'izy mampiasa ireo teknolojia laroina fisainana malalaka sy tia karokaroka. Ahoana no hanaovana izany? Eo no mipetraka ny olana, izay no mety ho nolazain'i Cantinflas, ilay Filozofa malazan'ny fiainana.
Sahala amin'ny efa nanomboka nandray an-tànana ireo teknolojia vaovao ireo mpamokatra horonantsarimihetsika malaza miaraka amin'ireo tale taty aoriana, mba hampihenàna ny fandaniana amin'ny famokarana ireo antsoina hoe ‘effets audiovisuels’ sy hitantarana ireo tantara izay mbola tsy niseho masoandro mihitsy.
Mandritra ny famoahana voalohany ny sarimihetsika “El Benny” tamin'ny 2010, ilay tale Jorge Luis Sánchez, niteny [es] hoe:
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia nomerika, efa mora kokoa ny mampiasa fakantsary sy solosaina izay azonao ikirakiràna araka izay ilàna azy ary rehefa miha-malalaka ny fampiasana ny fitaovana dia afaka manonofy no sady tsy miantehitra intsony amin'ireo mpanatontosa manan-tombo manokana isika.
Manondro ihany koa an'i Carlos Lechuga ny lahatsoratry ny The New York Times , mpamokatra sarimihetsika 29 taona ary nanatontosa ilay sarimihetsika “Melaza” tsy niankina tamin'iza na n'iza. Notsarain'ilay Kiobàna mpitsikera, Dean Luis Reyes, [es] ilay sarimihetsika ka miteny hoe “karazana tantara vaovao an'ireo akanga sisa nanamboran'ny sarimihetsika nasionaly.”
Melaza, notontosain'i Carlos Lechuga.
Aldo sy Mónica niharitra ny zavatra rehetra tamin'ny fametrahana voalohany indrindra ny finamanan-dry zareo. Olon-droa mifanentana tsara ry zareo ary niaro fatratra ny fiarahany na dia tsy nanana na inona na inona afa-tsy ny fitiavana aza. Ny rivo-piaraha-monina iainan'izy ireo dia ao anatin'ny tontolo mahavalalanina: manao ny fanisàna sy ny fanaraha-maso ireo milina miasa ao amin'ny foibe famokarana herinaratra ravehivavy, toerana izay “hiasany” isanandro; ary ralehilahy kosa mpanabe ankizy maromaro ao amin'ny sekoly kely iray efa mila hirodana, mampianatra milomano amina dombon-pilomanosana tsy misy rano.
Efa nahazoana loka maro ilay tetikasa, tao anatin'izany fanohanana ara-bola Hubert Bals momba ny Fampivoarana ny Sinema, ny Cinergia momba ny fiandoham-pamokarana, ary ny Fandaharan'asa Ibermedia izay nahafahany “niatrika tsikelikely ireo olany ara-bola”, raha ny nambaran'i [es] Lechuga.
“Mamokatra karazana sarimihetsika lava, fohy, fanadihadiana ary sarimihetsika fanentanana maro ireo Kiobana, matetika miainga avy amin'ny tsy misy firy akory fa dia namana vitsivitsy sy teti-bola tsotsotra an'ny ekipa – ary fanampiana kely avy amin'ny fanjakana sy ny Ivon-toerana Kiobàna Momba ny Sarimihetsika sy ny Indostrian'ny Sarimihetsika,” hoy ny The New York Times namintina.